दिल्ली क्यापिटल्सको नजरमा सन्दीप..? फेरि लेख्यो यस्तो! - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्ली क्यापिटल्सको नजरमा सन्दीप..? फेरि लेख्यो यस्तो!
काठमाडौंः आइसीसी विश्वकप लिग–२ को एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजमा अमेरिकामाथि कीर्तिमानी जीत हासिल गरेपछि अहिले नेपाली टिमको चर्चा शिखरमा भएको छ । बुधबार भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनमै अलआउट गर्दै कीर्तिमान रचेको थियो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटमा विपक्षी टीमलाई सर्बाधिक कम रनमा अलआउट गर्दै श्रीलंकासँगको कीर्तिमान बराबर गरेकाे हो । श्रीलंकाले सन् २००४ मा जिम्बाब्बेलाई पनि ३५ रनमै अल आउट गरेको थियो ।
जिम्बाब्वेले श्रीलंकासँग १८ ओभर खेलेर ३५ रन बनाएको थियो । अमेरिकाले भने १२ ओभर मात्रै खेल्दा सबै विकेट गुमाएकाे हाे । नेपालको कीर्तिमानी जीतमा टीमका स्पिनरद्धय सन्दीप लामिछाने र सुशन भारीको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो । सन्दीपले ६ ओभरमा एक मेडनसहित १६ रन दिएर ६ विकेट लिए ।
एकदिवसीय क्रिकेटमा उनको यो हालसम्मकै उत्कृष्ट बलिङ हो । यस्तै सुशनले ३ ओभरमा एक मेडनसहित ५ रन दिएर महत्वपूर्ण ४ विकेट लिन सफल भए । उनको पनि एकदिवसीय क्रिकेटमा याे अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बलिङ हो । अमेरिकासँग कीर्तिमानी जीतपछि पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपले दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै चर्चामा छ । उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई ठूला–ठूला सञ्चारमाध्यमले स्थान दिएका छन् ।
सन्दीपले भनेका के थिए?
‘पत्रकार सम्मेलन’मा सन्दीपले एसोसिएटमा आफू ‘नम्वर वान’ बलर भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अमेरिकासँग ६ विकेट लिएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अमेरिकासँग गरेको प्रदर्शनबारे सोधिएको प्रश्नमा सन्दीपले हाँस्दै भने, ‘राशिद खान अब टेष्ट प्लेअर हुन्, त्यसलाई बिर्सनुस् । अब (एसोसिएटमा) म नै नम्बर वान हुँ ।’
सन्दीप ओडीआइमा एकै इनिङ्समा ६ विकेट लिने एसोसिएट राष्ट्रका दोस्रो खेलाडी हुन् । पहिलो नम्बरमा अफगानिस्तानका स्पीनर रासिद खान छन् । उनले सन् २०१७ जुनमा वेष्ट इन्डिजविरुद्ध ओडीआईमा ८.४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १८ रन खर्चेर ७ विकेट लिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस बिग बास लिगः कस्तो रह्यो आज सन्दीपको पहिलो ओभर?
सन्दीपले दिएको ‘एसोसिएटमा म नै नम्बर वान हुँ’ भन्ने प्रतिक्रिया अहिले निकै चर्चामा छ । उनको यो प्रतिक्रियाप्रति केहीले समर्थन गरेका छन् भने केहीले ‘जोक’को रुपमा पनि हेरेका छन् । यसैबीच इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को सन्दीपआवद्ध दिल्ली क्यापिटल्सलेले चाहिँ उनको यो प्रतिक्रियालाई कुन रुपमा लिएको छ? यस्तो छ दिल्लीले सन्दीपबारे लेखेको सामग्री–